ပျမ်းမျှထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ Moving | မဟာဗျူဟာအနိုင်ရရှိမှုအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
ကျနော်တို့သင်ကိုတင်ပြချင်ပါတယ် ပျမ်းမျှ Moving ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ။ ဤနည်းလမ်းကိုစျေးနှုန်းဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်လက်ျာကုန်သွယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
ဤနည်းဗျူဟာ "Averages Moving" ဟုခေါ်ကြသည်နှစ်ခုလိုင်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ သူတို့ကကျပန်းအတက်အကျမရှိဘဲစျေးနှုန်းများ၏လှုပ်ရှားမှုပြသပါ။ သငျသညျရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းကြောင်းသစ်မြင်ကတစ်အမြတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဤရွေ့ကားလိုင်းများကိုသင်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများ၏ဦးတည်ချက်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့နှစ်ခုလိုင်းများကို အသုံးပြု. ? အဆိုပါအယူအဆကိုသူတို့ထဲကတစ်ဦးသည်အခြားဖြတ်သန်းသွားသည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါသင်က binary option ကိုရောင်းမဝယ်ဖို့ရှင်းလင်းစွာအချက်ပြရလိမ့်မယ်။
ဤနည်းဗျူဟာကိုစတင်သုံးစွဲဖို့သငျသညျနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနဲ့ window ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအလွယ်တကူ OLYMPTRADE platform ပေါ်တွင်တဦးတည်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သငျသညျကုန်သွယ်မှုသွားနေသောဘဏ္ဍာရေးတူရိယာများ၏ဇယားကိုဖွင့်။ ကျနော်တို့ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, EUR / JPY, GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ရွှေရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ (မော်စကိုအချိန်အားဖြင့် 09 00 ထံမှ: 12 မှ 00) သို့မဟုတ်အမေရိကန် session ကိုကုန်သွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန် (: 15 မှ 00 မော်စကိုအချိန်အားဖြင့် 19 00 ထံမှ) ဥရောပ session တစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ စျေးကွက်တက်ကြွမဟုတ်ပါဘူးသောအခါ, (များသောအားဖြင့် 20 ထံမှ: 00 မှ 08: မော်စကိုအချိန်အားဖြင့် 00) ဒီနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုဖို့ဖို့မပိုကောင်းတယ်။
ဒီတော့ 1 မိနစ်နေတဲ့အချိန်ကာလနှင့်အတူဇယားဖွင့်လှစ်။
ရရှိနိုင်ညွှန်းကိန်းများ၏စာရင်းထဲကနေပျမ်းမျှ Moving ရွေးကောက်တင်မြှောက်။
(ကျွန်တော်ဒီမျဉ်း "နှေးကွေး" မခေါ်ပါလိမ့်မယ်) ဒီလိုင်းများအတွက်အောက်ပါ setting များကိုသုံးပါ:
အရှည် = 60
=0offset
အရှည် = 5
ယခုငါတို့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်အဆင်သင့်များမှာ! ကျွန်တော်မှတ်မိနေသကဲ့သို့, အပြာလိုင်းနှေးကွေးနေသည်နှင့်အစိမ်းရောင်လိုင်းအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအလိုင်းများအချင်းချင်းကူးပြီးတာနဲ့သင်ကတက်သို့မဟုတ်ဆင်းတဲ့ binary option ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အချိန်မယ့်သိကြပါလိမ့်မယ်။5မိနစ်အချိန်ဘောင်ကိုသုံးပါ။ ဒါကအများကြီးအန္တရာယ်မရှိဘဲပေါ်ထွက်လာသောလမ်းကြောင်းသစ်ကနေအမြတ်အစွန်းစေရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်သည့်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအမြန်ရွှေ့ပျမ်းမျှလိုင်း (အစိမ်းရောင်တစ်ဦး) က TOP ကနေအောက်ခြေဖို့နှေးကွေးနေ Moving ပျမ်းမျှလိုင်း (အပြာရောင်တဦးတည်း) ဖြတ်သန်းသွားသည်သောအခါအသင်သည် "Down" ရောင်းဝယ်ဖောက်သင့်ပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့်အမြန်ရွှေ့ပျမ်းမျှလိုင်း (အစိမ်းရောင်တစ်ဦး) ကိုအောက်ခြေကနေထိပ်ဆုံးဖို့နှေးကွေးနေ Moving ပျမ်းမျှလိုင်း (အပြာရောင်တဦးတည်း) ဖြတ်သန်းသွားသည်သောအခါ "Up ကို" ရောင်းဝယ်ဖောက်သင့်ပါတယ်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏စံနမူနာကနေကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, ထိုဇယားကိုအဆက်မပြတ်အမြတ်အစွန်းအရောင်းအဖွင့်ဖို့အချက်ပြဖြစ်ပေါ်လာသော။ အဆိုပါလိုင်းများတဦးသည်အခြားကူးမှီတိုငျအောငျသငျသညျအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မစတင်သင့်ကြောင်းသတိပြုပါ။
Tags: တစ်ရက်ကုန်သွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေ့လျားပျမ်းမျှအားမဟာဗျူဟာ, ပျမ်းမျှအား crossover ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာရွေ့လျား, ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာရွေ့လျား, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာ 2019, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာသစ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ 2019, အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ, မဟာဗျူဟာအနိုင်ရအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး, parabolic sar ပျမ်းမျှအားကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာရွေ့လျား, ရိုးရှင်းရွေ့လျားပျမ်းမျှအားကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ